Alpinia (တရုတ်ဂျင်းပင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Alpinia (တရုတ်ဂျင်းပင်)
Alpinia (တရုတ်ဂျင်းပင်) ကဘာလဲ။
တရုတ်ဂျင်းပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
တရုတ်ဂျင်းပင် အပင်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး မြေကြီးအောက်တွင် အပြင်လိုက်ရှိနေသော အပင်၏ အမြစ်များကို ဆေးအနေနှင့် အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
သွေးထွက်ခြင်း နှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေရန်၊နှင့် အားတိုးစေရန် အသုံးပြုကြပါသည်။
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ပက်သက်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။ သို့သော် အချို့သောလေ့လာမှုများအရ တရုတ်ဂျင်းပင် တွင် ပါဝင်သည် ဓါတ်များသည် ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေသည်ဟုဆိုပါသည်။
တရုတ်ဂျင်းပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
တရုတ်ဂျင်းပင် အပါအဝင်အခြား ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
တရုတ်ဂျင်းပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
တရုတ်ဂျင်းပင် သည် အစားအစာများနှင့် ဖျော်ရည်များတွင် ပါဝင်သောပမာဏသည် အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။ ဆေးအနေနှင့် သောက်သုံးလျှင်ဖြစ်ေ၊ အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းလျှင်ဖြစ်စေ များသောအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိပါ။
နွယ်ချို၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပင်များ၊ဖက်ယားပ်ငနှင့် စပျစ်နွယ်များနှင့် လည်းတွဲ၍ ဖော်စပ်အသုံးပြုကြသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက်လည်း တရုတ်ဂျင်းပင် နှင့် ပက်သက်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။
တရုတ်ဂျင်းပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
တရုတ်ဂျင်းပင် သည် အဆစ်များနာကျင်ခြင်း၊ အနီဖုများထွက်ခြင်း စသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
သို့သော် လူတိုင်း ထိုဆိုးကျိုးများခံစား၇သည်မဟုတ်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပက်သက်ပြီး သိလိုသော် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။
တရုတ်ဂျင်းပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည် သင်သောက်နေသောဆေးများ၊ သင့်ရောဂါအခြေအနေများ နှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနေနိုင်သဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။ အောက်ပါဆေးများသည် တရုတ်ဂျင်းပင် နှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Antacid အစာအိမ်ဆေးများ (calcium carbonate (Tums, others), dihydroxyaluminum sodium carbonate (Rolaids, others), magaldrate (Riopan), magnesium sulfate (Bilagog), aluminum hydroxide (Amphojel), and others)
တရုတ်ဂျင်းပင် သည် အစာအိမ်၏ အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လျော့နည်းစေသော အထက်ပါ ဆေးများ၏အာနိသင်ကို ဆန့်ကျင်ကာ အက်ဆစ်ဓါတ်ကို ပိုများစေသည်။
H2 blocker အစာအိမ်ဆေးများ (cimetidine (Tagamet), ranitidine (Zantac), nizatidine (Axid), and famotidine (Pepcid).
Proton pump inhibitors အစာအိမ်ဆေးများ (omeprazole (Prilosec), lansoprazole (Prevacid), rabeprazole (Aciphex), pantoprazole (Protonix), and esomeprazole (Nexium) )
တရုတ်ဂျင်းပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
တရုတ်ဂျင်းပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Alpinia.http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-276-alpinia.aspx?activeingredientid=276&activeingredientname=alpinia. Accessed March 10, 2017